ပန်းပွင့်လေးလို အမြဲလန်းဆန်းနေပါစေ ကလေးငယ် . . . – Healthy Life Journal
ပန်းပွင့်လေးလို အမြဲလန်းဆန်းနေပါစေ ကလေးငယ် . . .
ကလေးငယ်တွေက ပန်းလေးတွေနဲ့ တူပါတယ်။ သူတို့တွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေချိန်မှာ လန်းစွင့်နေတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေလို ချစ်စရာကောင်းပေမယ့် ဝေဒနာတစ်စုံတစ်ရာ ခံစားရချိန်မှာ ညှိုးနွမ်းနေတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေလို သနားကရုဏာသက်စရာပါ။ ကလေးတွေ ဝေဒနာခံစားရတဲ့အခါ မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူတွေ စိုးရိမ်ပူပင်မှုကင်းကင်းနဲ့ သက်သာအောင် ပြုစုပေးနိုင်မယ့် အကြံပြုချက်တွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
၀မ်းလျှောတာက ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ကူးစက်ပိုးဝင်တာ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်တွေ အသောက်များတာနဲ့ အစာနဲ့မတည့်တာတွေကြောင့် ၀မ်းလျှောရတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲ – ကလေးဝမ်းလျှောရင် ၀မ်းလျှောတာရပ်တဲ့အထိ ရေဓာတ်နဲ့ ဓာတ်ဆားပြန်ပြည့်အောင် ဓာတ်ဆားရည်ကို အချိုးကျကျဖျော်ပြီး တိုက်ပေးပါ။ ကလေးက အချိန် ၂၄ နာရီကျော်တဲ့အထိ ၀မ်းလျှောမရပ်သေးရင် ဒါမှမဟုတ် အန်တာ၊ ၀မ်းထဲသွေးပါတာ၊ ၀မ်းမည်းမည်းသွားတာနဲ့ ဗိုက်အောင့်တာတွေနဲ့ တွဲဖြစ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့ လိုနေပါပြီ။
မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ အဖျားအနည်းငယ်ရှိတာက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ကူးစက်ပိုးဝင်တဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲ – ကလေးကို အရည်များများတိုက်တာ၊ ရေအေးဝတ်နဲ့ ရေပတ်တိုက်ပေးတာ၊ ပေါ့ပါးတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ၀တ်ပေးတာတွေ လုပ်ပေးပါ။ ကလေးအသက်သုံးလအောက်မှာ ကိုယ်အပူချိန်များနေရင် ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသင့်ပါတယ်။ ကလေးကဖျားတာနဲ့အတူ နားကိုက်နေသလား၊ ချောင်းဆိုးနေသလား၊ အနီပြင်တွေ ပေါ်နေသလား၊ အန်နေသလား၊ ၀မ်းလျှောနေသလားဆိုတာကို ဂရုစိုက်ပါ။ ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့ အတူတွဲပြီး တွေ့ရတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်ပါတယ်။
မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေက တစ်နေ့မှာ မကြာခဏ ၀မ်းသွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ တစ်နေ့လုံး ၀မ်းမသွားဘဲလည်း နေတတ်ပါတယ်။ ကလေးကို မိခင်နို့ချိုတစ်မျိုးတည်းတိုက်နေရင် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကလေးတွေ တကယ်ဝမ်းချုပ်တယ်ဆိုတာက ၀မ်းတွေမာကြောပြီး ၀မ်းသွားရင် နာကျင်နေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲ – ဖြည့်စွက်ဆေးစားတဲ့အရွယ်မှာ ၀မ်းချုပ်ရင် ဆီးသီးဖျော်ရည်တိုက်တာ၊ ရေများများတိုက်တာ တွေ လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
ကလေးတွေရဲ့  အသားအရေက နုနယ်တာကြောင့် ထိလွယ်ခိုက်လွယ် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးအရေပြားနီမြန်းတာက အဖုသေးတွေကနေ နှင်းခူအထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးအနှီးကြောင့်လည်း အရေပြားနီမြန်းတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲ – ကလေးအနှီးကို မကြာခဏလဲပေးပါ။ နှင်းခူနဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေ မဖြစ်အောင် ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဆပ်ပြာတွေကိုရှောင်ပြီး အရေပြားကို အမြဲစိုပြေနေအောင် ကလေးသုံးလိုးရှင်း လိမ်းပေးပါ။
ကလေးတွေရဲ့  ချောင်းဆိုးတဲ့အမျိုးအစားက အမျိုးမျိုးပါ။ အအေးမိတာ၊ ဖျားတာကြောင့် ချောင်းဆိုးတတ်သလို ရင်ကျပ်ပန်းနာတာ၊ ပိုးဝင်တာကြောင့်လည်း ချောင်းဆိုးတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲ – ကလေးကို ပူနွေးတဲ့အရည်တိုက်တာ၊ လေထုကို စိုစွတ်နေအောင် ပြုလုပ်ပေးတာတွေက ကလေး ရဲ့  ချောင်းဆိုးဝေဒနာကို သက်သာစေပါတယ်။ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကိုတော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ ကလေးကိုတိုက်ပါ။
ကလေးတွေက လေအောင့်ပြီဆိုရင် စူးစူးဝါးဝါး ငိုကြွေးတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျောကော့ပြီး ငိုတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲ – လအောင့်တာအများစုက အန္တရာယ်မရှိသလို အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း သူ့အလိုလို သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ ကလေးကို သက်သာအောင် ပွေ့ထားပေးပါ။
(၇) သွားပေါက်ချိန် နာကျင်မှု
ကလေးအသက် ခြောက်လအရွယ်မှာ ငယ်သွားလေးတွေ စထွက်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ သွားဖုံးတွေနာကျင်တာကြောင့် ကလေးတွေက ငိုယိုဂျီကျတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲ – ကလေးကို သွားဖုံးနာတာသက်သာအောင် ပါးစပ်ထဲမှာကိုက်ဖို့ သွားကိုက်ကွင်းပေးထားပါ။ အေးမြစိုစွတ်တဲ့ ပိတ်စသန့်သန့်နဲ့ သွားဖုံးတွေကို ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ကလေးရဲ့ သွားဖုံးတွေကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ညင်ညင်သာသာ နှိပ်ပေးတာကလည်း သက်သာနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေ အအေးမိတဲ့အခါ နှာခေါင်းပိတ်တတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲ – ဆားရည်(Saline Drops) အစက်ချပြွန်ကိုသုံးပြီး ကလေးရဲ့ နှာခေါင်းထဲကို ထည့်ပေးပါ။ နှာခေါင်းမြှေးတွေကို ကျဲသွားစေပြီး နှာခေါင်းပိတ်တာ သက်သာနိုင်ပါတယ်။
(၉) ပျို့ အန်ခြင်း
ကလေးတွေက အစာစားပြီးချိန်မှာ မကြာခဏ အန်တတ်ပါတယ်။ ကား၊ သင်္ဘောတွေ စီးတဲ့အခါမှာလည်း လှုပ်ရှားမှုကြောင့် အန်တတ်ပါတယ်။ အန်တာအများစုက စိုးရမ်စရာမရှိပါဘူး။ အန်တာနဲ့ ၀မ်းလျှောတာတွဲဖြစ်ရင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲ – ကလေးဟာ အန်တာကြောင့် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ရင် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်နိုင်ပါတယ်။ ရေများများတိုက်ပေးပါ။ ဓာတ်ဆားရည်ကို နည်းနည်းနဲ့ မကြာခဏတိုက်ပေးရင်လည်း ရေဓာတ်ပြည့်ဝပါတယ်။ အန်တာက နာရီအနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိ ဖြစ်နေရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါတယ်။
Related Items:Baby, Healthy Habit, medical knowledge